Faah faahin laga helay khasaaraha ka dhashay dagaalka Gobolka Shabeellaha Hoose | Allbalcad Online
Home WARARKA Faah faahin laga helay khasaaraha ka dhashay dagaalka Gobolka Shabeellaha Hoose
Faah faahin laga helay khasaaraha ka dhashay dagaalka Gobolka Shabeellaha Hoose
Mas’uuliyiinta ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay iska caabiyeen weerarro ay saacadihii hore ee saaka ku soo qaadeen Al-Shabaab saldhigyada ciidamada ee magaalooyinka Bariire iyo Awdheegle ee Gobolka Shabeellada Hoose.
Weerarradan ayaa la sheegay inay iskugu jireen qaraxyo iyo weerar ay gaysteen Al-Shabaab, waxaana ka dhashay khasaaro isgu jira dhimasho iyo dhaawac ah oo soo kala gaaray labada dhinac.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Sarreeye Guuto Odawaa Yuusuf Raage ayaa u sheegay warbaahinta dawladda in ciidamada dawladda ay fashiliyeen weerarrada lagu soo qaaday Bariire iyo Awdheegle. Taliyuhu waxa uu sheegay inay khasaare badan u gaysteen Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegatay inay ciidamo ka tirsan dawladda ku dileen weerarradaas. Labada magaalo ayaa la sheegay inay haatan gacanta ku hayaan ciidamada dawladda.
Ciidamada dagaalka ka dhacay Shabeellaha Hoose ee dagaalka ku dhintay ayaa waxaa kamid ah Cali Daahir Mataan iyo Captain Cabdirashid Maxamed Nuur oo kamid ahaa saraakiishii hogaamineysey ciidankii xaley ay Shabaab kusoo weerareen Bariire iyo Awdhegle.
Previous articleSarkaal Ciidan oo ka badbaaday isku day dil
Next articleJubbaland oo soo saray digniin ku socota Shacabka Kismaayo